FITANTANANA NY FANANANTANY : Hasiam-panavaozana ny fahazoana sarin-tany avy amin’ny zanabolana
Isan’ireo sehatra aharaisana fitarainana betsaka indrindra eny amin’ny Fitsarana ny ady tany eto Madagasikara. Saika ahitana fifanolanana mahakasika io avokoa ny birao ifoton’ny fananan-tany manerana ny Nosy. 22 juin 2020
Ho fanatsarana ny fitantanana ny fananan-tany eto Madagasikara indrindra dia notontosaina tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo ny fivoriana niarahan’ny ekipa notarihin’ny Minisitry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP) tamin’ireo solontenan’ny USAID amin’ny fanombohana fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta momba ny fahazoana sarin-tany avy amin’ny zanabolana ho an’i Madagasikara. Miara-miombon’antoka sy manao tantsoroka amin’ny fanampiana an’i Madagasikara hahazo io sarin-tany io koa ny Banky iraisam-pirenena.
Dingana lehibe amin’ny fanatsaràna ny fitantanana ny fananan-tany eto Madagasikara ny fanavaozana ireo sarin-tany ireo, raha ny fanazavana. Araka ny fantatra mantsy, efa tamin’ny taona 1949 no farany nananantsika izany manerana ny Nosy ary tsy nisy fanavaozana firy izany hatramin’izao. Sahirana, araka izany, ireo mpikirakira ny lafin’ny fananan-tany satria efa betsaka ny fiovana nisy.